» बूढो देखाउने फेस एपको फन्डा के हो? केही नोक्सान त गर्दैन यसले?
२ श्रावण २०७६, बिहीबार ०६:२९
एक्सपर्टहरुका अनुसार खासमा फोटोलाई तपाईँकै डिभाइसमा प्रोसेर गरे पनि हुने हो। तर त्यसो नगरी यसले फोटोहरुलाई बाहिरको सर्भरमा पठाउँछ। यसो गर्न किन जरुरी भयो, उल्लेख छैन। सेक्युरिटी रिसर्चरहरुले यो विषयमा चासो देखाएका छन्। एप बनाउने रसियाली Yaroslav Goncharov ले यसबारे केही भनेका छैनन्।